Chiremba anokurudzira kudya ichi chinwiwa chemonate kuti ubvise chigaro chakachengetwa mumakoloni uye kurasikirwa nemutoro - HEALTH PLUS MAG - TELES RELAY
HOME » MAZANO Chiremba anokurudzira kudya ichi chinwiwa chemonate kuti ubvise zvigaro zvakanamirwa mumakoloni uye uremerwe uremu - HEALTH PLUS MAG
kugashira / Chikafu uye mapoka / Zvokudya zvehutano / Constipation /
Chiremba anokurudzira kudya ichi chinwiwa chinwiwa kuti ubvise chigaro chakakanyikidzwa mumakoloni uye kurasikirwa nemutoro
Isu tose tinotarisira kuva nepfuma yakawanda, ine utano uye yakagadzikana kuitira kuti muviri wedu uite zvakakwana; izvo zvinoda zvibayiro zvizhinji, kusanganisira kukanganisa. Asi nemabasa akasiyana-siyana ehupenyu hwezuva nezuva, zvinowanzoitika apo izvi hazvigoneki, kusvika pakuzviisa pasi kuvimbiswa.
Muchikamu chino, ticharatidza mutsara unobva pazvinhu zviviri zvinokosha zvinogona kukurudzira kudyiwa uye zvachose kusununguka kubva pakuvhara.
Kuti ugadzirire iri rekudzivirira kuzvirambidza, iri nyore kwazvo: iwe uchada chia mbeu bv Du citron sezviyo zvakakosha.
Irosi ndiro chikafu chinobva kune fiber, zvikamu zvinokosha pakurwisana nekuvhara. Chidzidzo akabudirira pave kubatana pakati kupatirwa uye kushayiwa mu Mishonga faibha, achiratidza sei kuwedzera internet yaunodya iri zvokudya, izvo kunobatsira kuderedza zviratidzo kupatira. Maererano migumisiro chidzidzo ichi anofanira kuparadzwa svinga 20 kusvika 35 magiramu rimwe zuva kuti utano.
Mukuwedzera, remon inomira kune imwe michero yemucrorus thanks kwayo acidityiyo inowedzera kubudiswa kwe bile uye inovandudza mumukati kuenda. Izvi zvakanaka detoxifying saka rinokurudzira kubviswa kwemarara uye kunobatsira kurwisana nekuputika nekudzivirirwa.
Kubva kuna Salvia Hispanica, simiti iyi yakafanana neminwe, mbeu dze chia vanozivikanwa zvikuru muSouth America, munharaunda yavo yemusha. Vanowanzozivikanwa sevasina hanya navo, vanobatanidza nyore nyorealimentation zuva rega rega, asiwo zvekubatsira kwavo mukudzivirira kuvimbiswa. Kana iwe uchida kuwedzera huwandu hwehutano hwezvokudya mukunwa kwako, iwe unodawo kudya zvimwe chia mbeu. Somuenzaniso, kupedzana spoon (15 Rine mamiririta) mbeu izvi zvinopa 4g Mishonga faibha, zvinokosha ndeyokubvisa kupatira, bloating uye kuderedza fufune sematsananguriro Dr. Barbara Bolen
Mukuwedzera, mbeu dzechia dzinogona kushandiswa kudzivirira nokuti dzine mukurumbira wokuderedza kudya kwevana vavo kushanda Nzara suppressants. Izvi zvinokurudzira kunaka uye mucilaginous properties (kureva maitiro ayo anonyoroka) inoita mbeu idzi, kudya kunonyanya kukosha mukudya kwako, kunyanya kana zvichiitika mukudya kwekudya.
Sezvaunogona kuona, chia mbeu ndimu, kunze kuva kunobetsera mukuru utano muviri, ane zvinhu zvakakodzera kuti, kana zvabatanidzwa, kuchaita kuti uderedze pachako chete uye noutano matambudziko zvomudumbu.
Anti-kuvimbiswa kemuchepe nembeu nemon uye chia:
· 1 tablespoon juice ye citron
· 1 ndiro yemvura
· 1 teaspoon yeuchi
· 1 tablespoon yembeu chia
Tanga nekuisa mbeu dzechia mugirazi remvura yako kweawa kuti uite kuti dzifadze. Kana imwe nguva yapfuura, bvisai uye muvatsinhanise nemamwe mishonga kusvikira vaine maitiro akafanana.
Nzira yekushandisa nayo:
Shandisa kikapu chekugadzirira uku mangwanani oga oga musina chinhu chisina chinhu kuti uwanezve hutumbu hwekufamba.
Lemon inopesana nemaronda emudumbu, zvinokonzerwa nebhaariary uye renal uye mishonga yevirusi. Mbeu dzeChia hazvikurudzirwi kune vanhu vanotambura nechirwere cheprotate, kudzvinyirirwa kweropa kana kuve anticoagulant therapy. Vanhu vane zvipembenene kune mbeu yeSesame kana majekisi havafaniri kuidya. Kazhinji, ruremekedza mazoro uye bvunza chiremba wako mazano asati ashandisa mushonga wepanyama.